Notebook , Laptop , Netbook and Desktop ရဲ့ ကွာခြားချက်များ။ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Notebook , Laptop , Netbook and Desktop ရဲ့ ကွာခြားချက်များ။
ပို့စ်7ခုအတွက် 37 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Lap top Vs Notebook
Laptop နဲ့ Notebook ဘာ တွေ ကွာ တယ် ဆို တာ ရှင်း ပြ ပေး ကြ ပါ အုန်း
Last edited by ဒေါက်တာဂေါက်; 04-09-2009 at 10:56 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဒေါက်တာဂေါက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
green leaf, zo
Find More Posts by ဒေါက်တာဂေါက်
ပြန်စာ - Laptop နဲ့ Notebook ဘာ တွေ ကွာ တယ် ဆို တာ ရှင်း ပြ
Notebook နှင့် Laptop အတူတူပဲလား လို့မေးလာရင် မတူဘူးလို့ ဖြေရပါလိမ့်မယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ နှစ်ခု ကြားမှာ ကွဲပြားခြားနားချက် များစွာ ရှိလို့ပါ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် Laptop ဆိုတာ Desktop ( စက်ကြီး) ကဲ့သို့ အလုပ် လုပ်နိုင်ပြီး Notebook ကတော့ အပေါ့စားကျောင်း လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ် စာကြည့်ဖို့ပဲ သင့်တော် ပါတယ် laptop ရဲ့ Processor, HD အစရှိတဲ့ component များရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်မှု့စွမ်းရည်များဟာ Notebook ထက် သာလွန် ကောင်းမွန် ပါတယ် တကယ်တမ်း အခြေခံ ကျကျ Notebook နှင့် Laptop အကြား ကွဲပြားခြား နားချက် များကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ...........
အောက်ပါအသင်းဝင် 47 ဦးတို့မှ ကိုဖြိုးငြိမ်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုရင်ပြည့်စုံ, ဆန်းမောင်, ပုဂံသူ, ပွင့်ဖူးမွန်, ဖိုးရှမ်း, ဖယောင်း, မင်းညိုစော, မင်းသီဟထွန်း, မုန်းလေး, မျိုးမင်းငယ်အောင်, ရှိုင်းသော်တာမင်း, သက်နိုင်, သံပုရာချို1987, ကောင်ပေါက်စ, ကျော်ထက်ချိန်, ကျော်ဝင်း, နေလင်း09, မောင်ရိုး, အောင်စည်သူ, အေးမင်းမောင်, ကြက်ရိုး, ဖြိုးယံလေး, နိုင်သူရ, alicia5556, arkaraung, aungzawlin, azp09, blackNwhite, bonge, Cheebomb, chitnyimalay, green leaf, hazyworld, kozaw.dagon, kyawthu165, LaMike, maJunior, mdythulay, naychiyoon, phyomyintthein, PyaitSone, smlat88, thamadi, thurein, waterpeople, whiteman, zo
18-10-2009, 09:03 AM
ကိုဖြိုးငြိမ်းပြောမှပဲ Laptop နဲ့ Notebook ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာသိတော့တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ကြက်ရိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Laptop နဲ့ Notebook ဘယ်လိုကွာခြားလဲဆိုတာကိုတော့သိပါပီ
ဒါပေမယ့် Netbook အကြောင်းတော့မသိသေးပါဘူးရှင်းပြပေးပါဦး
14-01-2010, 04:22 AM
Netbook အကြောင်းကို ဒီလို အကြမ်းဖျဉ်း မှတ်သားလို့ရပါတယ်....
Netbook ကို တခါတရံ mini notebooks သို့မဟုတ် ultraportables လို့ ခေါ်ကြပြီးတော့ CNET Networks, Inc က ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ Netbook လို့ စတင် အမည်ပေး ခဲ့ပါတယ်..... အင်တာနက် အသုံးပြုရုံ နဲ့ စာစီစာရိုက် ကဲ့သို့သော ရုံးသုံးလုပ်ငန်း အတွက်သာ ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားပါတယ်... အလေးချိန် 2-3 pounds (0.9 – 1.4 kilograms) အတွင်းရှိကြပါတယ်... Screen အရွယ်အစားက 6-10 inches (15-25 cm) အတွင်းရှိပါတယ်... Notebook လိုပဲ CD-DVD Drive မပါပါဘူး... ဈေးနှုန်း အနေနဲ့ သက်သာအောင် ပြုလုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.... Notebook ထက် အရွယ်အစား နဲ့ ဈေးနှုန်း ပိုပြီး သက်သာ တာက လွဲရင် ကျန်တာ မပိုပါဘူး....
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ မင်းသီဟထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုင်သူရ, aungzawlin, bonge, chitnyimalay, kyaukphyu, moeswechitthu2010, smlat88, tu tu, waterpeople, zinwinhtike01, zo
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 19 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Note book , Net book and laptop ဘယ်လိုခွဲခြား?
Note book , Net book နဲ့ laptop တွေကို အတွင်းပိုင်းက ဘယ်အရာကို ကြည့်ပြီး အစိကခွဲခြားပါသလဲခင်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ NaNge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by NaNge
ပြန်စာ - Note book , Net book and laptop ဘယ်လိုခွဲခြား?
ဒီလင့်တွေမှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ။ Note book , Net book and laptop တွေ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကွဲပြားချက်တွေကိုပြောပြပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ။
Last edited by blackNwhite; 07-09-2010 at 12:43 PM.. Reason: လင့်ဖြည့်
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ blackNwhite အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ပေါ်ဦး, aungzawlin, bonge, zo
ကျနော်တို့ဖိုရမ်မှာ Laptop နဲ့ Notebook ဘာ တွေ ကွာ တယ် ဆို တာ ရှင်း ပြ ပေး ကြ ပါ၊၊ ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာ ကိုဖြိုးငြိမ်း ရှင်းပြထားဒါတော့ ရှိပါတယ်.. ယခု မေးခွန်းက Note book , Net book and laptop ဆိုတဲ့ အမျိုးအ စား (သုံး) မျိုးဖြစ်လာရယ်လို့ ကျနော်တို့ သုံးမျိုးစလုံးကိုယ် အသေးစိတ်မဟုတ်ရင်တောင် အနည်းအကျဉ်း သိဖိုး လိုလာပါပြီ..
ဒီ ကွာခြားချက်နိူင်းယှဉ်ချက်များကိုယ် မူရင်းရေးသားသူမှာ ကို khunlazer ဖြစ်ပြီး ကူးယူဖော်ပြသည့် လင့်ခ်မှာ အောက်ပါလင့်ခ်ဖြစ်ပါသည်၊၊
မိသားစုဝင်များ သေးသေးကွဲကွဲသိသွားဖိုးနှင့် အားလုံးဗဟုသုတ တိုးပွားဖိုးရာ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် ၊၊(မိသားစုဝင်များ အားလုံးဘဲနားလည်ပေးကြပါ).. မူရင်းလင့်ခ်မှာလည်း သွားရောက် ဖတ်ရူလို့ရနိုင်ပါတယ်.. အစ်ကို khunlazer ကိုယ်လည်း ဒီနေရာကဘဲ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပရစေဗျာ..
အားလုံးဘဲ နားလည် အဆင်ပြေပါစေ..
ခင်မေခ, ရှိုင်းသော်တာမင်း, သန့်ဇင်ဌေး, အဖွားကြီး, ဇော်ရဲပိုင်, အောင်လွင်ဦး, အေးမင်းမောင်, ဖြိုးယံလေး, aungzawlin, blackNwhite, kyawthu165, KznT, moe_poung, naychiyoon, phyomyintthein, sein shwe maung, soehtetpaing, tu tu, whiteman, zo
ကျွန်တော်လည်း စာမရေးဖြစ်တာ ကြာသွားတယ်။အပိုင်း ၁ ကို ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ရေးခဲ့ပီးပါပီ။ အပိုင်း ၂ ရေးဖို့ကို ကျွန်တော် အလုပ်ရူပ်နေတာလည်း နည်းနည်းပါလို့ပါ။ကျွန်တော် ဒီခေါင်းစဉ်ကို ဆက်ရေးဖြစ်ဖို့ အရှိန်တော်တော် ပြန်ယူနေရတယ်။ စာရေးတာ ပျက်နေပီဆိုရင် စာပြန်ရေးဖို့ အရှိန်ယူရတာ သိပ်တော့မကောင်းဘူး။ .. ဒီနေ့ ကျွန်တော် Notebook နဲ့ Netbook ရဲ့ ကွာခြားချက်လေးတွေကို ပြောပြပါမယ်။ သူ့မှာ ကွာခြားချက် ကြီးကြီးမားမားတွေ ရှိတယ်လို ဆိုလို့ ရသလို နောက်ထပ် သိသင့်သိထိုက်တာလေးတွေကို ကျွန်တော် ပြောပြသွားပါမယ်။ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားရမှာက Laptop ကိုပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် Netbook ကိုပဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ၀ယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ၀ယ်ယူမှာ ဘယ်နေရာမှာ သုံးဆွဲမှာလည်းဆိုတာကို အရင်ဆုံးစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Netbook နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို သိထားမှ ဘယ် အမျိုးအစားကို ၀ယ်ယူရမယ်ဆိုတာကို သိပါလိမ့်မယ်။ ကဲ့ ဒီတော့ Netbook နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်လေးတွေကို စကြည့်ကြရအောင်။
Battery က ကျွန်တော်တို့ နိင်ငံတွက်တော့ ပိုပီးအရေးပါတယ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ Netbook battery တွေက ပိုပီး သုံးဆောင်လို့ ရနိင်မယ့် ကြာချိန်ပိုများပါတယ်။ Netbook battery တွေက ၈ နာရီနှင့် အထက်ထိတွေ့နိင်ပီး… Laptop တွေမှာတော့ ၃ နာရီကနေ ၆ နာရီကျော်ထိပဲ့တွေနိင်ပါတယ်။ ခရီးသွားရင်းသုံးဆောင်မယ် ဆိုရင် Netbook က Laptop ထက်ပေါ့ပါးပီး…အချိန်ကြာရှည်ပိုပီး အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Laptop နဲ့ Netbook ရဲ့ ကွာခြားချက်လေးတခုရှိပါသေးတယ် ။ ဒါကတော့ Netbook က Network ကို အသားပေးပီး ထုတ်လုပ်ထားတာပါပဲ့။ ကျွန်တော် Netbook နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်တွေကို အတော်အသင့်ပြောပီးပါပီ.။ကျွန်တော် နောက်ရက်မှာ Desktop နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက် အနည်းငယ်ကို ဆက်ပီး တင်ပေးသွားပါမယ်။ မိသားစုအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...
ကျွန်တော် thread ကို သက်သက် ခွဲလိုက်တာက ကွာခြားချက်တွေကို ရေးထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်မို့ ကျွန်တော် နောက်တခု ထပ်ဖွင့်လိုက်တာပါ။ တကယ်လို့ ကြီးကြပ်သူ အကိုအစ်မတို့ အနေနဲ့ ပေါင်းလိုက်လို့ ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပေါင်းပေးပါ။ တကယ်လို့ ဒီတိုင်းထားလို့ ရတယ်ဆိုရင်တော့ ထားစေချင်ပါတယ် ကွာခြားချက်တွေချည်းပဲ့ သတ်သတ်ရေးပေးတာမို့ပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။.....
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 22-06-2011 at 05:56 AM..
ကိုသီလ, ချစ်သမီး, လမ်းပြကြယ်, နေမင်းမောင်, မောင်စိန်ရွှေ, အေးမင်းမောင်, ဖြိုးယံလေး, bagothar85, blackNwhite, bonge, g00gle, KznT, MegaWooer, minthike, pannuko, phyomyintthein, zo
22-06-2011, 07:39 AM
ပြန်စာ - Notebook , Laptop , Netbook and Desktop ရဲ့ ကွာခြားချက်များ။
နောက်ပိုင်း laptop နဲ့ notebook ရဲ့ကွာခြားချက်တွေက ကျဉ်းမြောင်းသွားပြီလို့ ထင်တယ် ကိုသန့်ဇင်ဌေး ရ..
Screen size နှင့် အလေးချိန်..ဥပမာ mac air ဒါမှမဟုတ် samsung9series laptop တွေဆို screen size နှင့် အလေးချိန် တွေက netbook range ထဲရောက်နေပြီလေ..
SSD drive အသုံးပြုတဲ့ laptop တွေလဲရှိလာပြီဖြစ်ပြီး SSD drive တွေကတော့ သာမာန် အသုံးပြုသူများအတွက် ဈေးနှုန်းကြီးနေပါသေးတယ်
ပီးတော့ Laptop မှာ HDD Storage ပမာဏကလဲ 600GB ထက်ကျော်တဲ့ laptop တွေလဲရှိနေပါပြီ
နောက်ပြီး Netbook အများစုမှာ CD/DVD Drive မပါပါဘူး။ ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ..
ကိုသီလ, ချစ်သမီး, သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, မောင်စိန်ရွှေ, ငြိမ်းချမ်း, aungkohtat, blackNwhite, bonge, g00gle, KznT, pannuko, thureinsoe, zo
ကိုမင်းထိုက်ပြောပြတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီလေး အနေနဲ့က Rule အရ အများစုကို ချုံပြောပြသွားတာပါ။ ပီးတော့ HDD နဲ့ SSD ကို ခုနောက်ပိုင်း Laptop တွေမှာ သုံးလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။ HDD ရဲ့ နှစ်ဆ SSD တန်ဖိုးမြင့်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာက Netbook နဲ့ Laptop အရင်က ကွာခြားချက်တွေ အပြင်နောက်ထပ် ဖြည့်ပြောသွားမယ့်အစီစဉ်လေးကိုပါ ညီ တွေးထားတာမို့ အရင် Rule အတိုင်းပြောပြလိုက်တာပါ။ နောက်တခုက Netbook အများစုမှာ CD/ DVD မပါဘူးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တွေ့ဘူး ဖတ်ဖူးတဲ့ အထဲ့မှာတော့ သူက CD /DVD မပါဝင်တာ ကိုပဲ့ တွေ့သလို ကိုယ်တိုင်တွေံဘူး ကြုံဘူးတဲ့ အထဲ့မှာလည်း မပါဝင်တာကြောင့် ကျွန်တော် ထည့်ရေးလိုက်တာပါ။ ဒီ စာတွေကို မရေးခင်က ကျွန်တော် ဒီဖိုရမ် နဲ့ ဒီဖိုရမ်မှာ ကိုယ်တိုင်သွားပီး စာတွေလက်တွေ့ လေ့လာခဲ့တာပါ။ အဲ့တာပီးမှ ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို စရေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ အထဲ့မှာ လိုအပ်ချက်တွေ များသွားတဲ့ အတွက် မိသားစုအားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်း Laptop တွေမှာ 1 TB ထိ ပါလာတာကိုလည်း ညီ သတိထားမိပါတယ်။ အနည်းစု အရမ်းကို % နည်းလို မလို့ ညီ ဖြည့်မပြောခဲ့တာပါ။ဒါကိုတော့ ညီ Desktop နဲ့ Laptop ကွာခြားချက်များအကြောင်းနဲ့ ဖြည့်စွက်ချက်တွေကို ရေးကာကျရင် တခါတည်းထည့်ပြောပေးသွားပါ့မယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုသီလ, ချစ်သမီး, နေမင်းမောင်, မောင်စိန်ရွှေ, bagothar85, g00gle, KznT, minthike, pannuko, zo
Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွားခြားချက်..
ကျွန်တော့ကို ဟိုတနေ့က ညီငယ်တစ်ယောက်က စာလာမေးသွားတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အဲ့နေ့က မဖြေဖြစ်လိုက်ဘူး။ ကဲ့ ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော် ညီငယ်လေးကို ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူသိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့...
Notebook နှင့် Laptop ရဲ့ ကွားခြားချက်.. ကို သိချင်ပါတယ်တဲ့
ကျွန်တော် Notebook နဲ့ စပြောပါ့မယ်။ Notebook က သွားလာလူပ်ရှားရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေမူတွေတွက် ထုတ်ကုန်တခုအဖြစ် ဈေးကွက်တွေမှာ ရပ်တည်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ Notebook မှာ chip မပါဝင်တဲ့ အပြင် ဈေးအရမ်းကြီးပါတယ်။ ဈေးကြီးတဲ့ အမျိုးအနွယ်ဝင်လို့ သမုတ်ခံရတဲ့ အမျိုးအစားတမျိုးပေါ့။ သူရဲ့ လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားနိုင်အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ weight နဲ့ ဘယ်နေရာကို သယ်သွားသွား ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဘထရီအားသာ အပြည့်ရှိမယ်ဆိုရင် သူ့မှာ အနည်းဆုံး ၄ နာရီကနေ အထက် အသုံးပြုလို့ရတဲ့ ဘထရီ ပါရှိပါတယ်။ သူဟာ ultra light အမျိုးအစားပါ။ နောက်ထပ် တခုကတော့ notebook မှာ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ကတည်းက သုံးလာခဲ့တဲ့ Floopy drive ကို External drive အနေနဲ့ သုံးခွင့်မရှိပေ့မယ့် စွမ်းရည်ပြည့် CD ဒါမှမဟုတ် DVD ပါရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အဓိကကွာခြားချက်ကတော့.. Graphic နဲ့ Screen ပါ။ Graphic ကို Laptop လောက် စွမ်းရည်ပြည့်ပါရှိမှာ မဟုတ်လို Minimum ပဲ့ ပါရှိပါမှာ ဖြစ်သလို Screeen ကလည်း 12 လက်မကနေ 14 လက်မထိပဲ့ ရှိပါတယ်။ ကဲ့ နောက်ထပ် Laptop ကို သွားကြပါဦးစို့....
အခုတော့ ထွက်ရှိလာသမျှ Portable computer အမျိုးအစားတော်တော်များများကို များသောအားဖြင့်ပေါ့ လူတွေက Laptop လို့ပဲ့ ခေါ်ဆိုနေကြသလို Laptop နဲ့ notebook နဲ့ တူညီတာကတော့ Potable ဖြစ်တာခြင်းပါပဲ့။ ဒါဆို ကွာခြားချက်ကို ဆက်ကြည့်ရအောင်..သူတို့ နှစ်ခုလုံးမှာ မတူညီတဲ့ Feature တွေ ရှိတယ်လို့ Wiki က ဒီလို ဆိုပါတယ်။ “ Quite large and has lots of power with several features.” ပိုပြီး ကွဲပြားသွားအောင် Laptop ရဲ့ Feature တွေ ကိုပြောပါဦးမယ်။ Laptop ဟာ Notebook ထက် အနည်းငယ် ပိုကြီးပြီး အလေးချိန်ကလည်း notebook ထက် ပိုပါတယ်။ နောက်ထပ် အဓိက ကွာခြားချက်ကတော့ Graphic ပိုင်းပေါ့။ သူ့မှာ Nvidia GeForce ဒါမှမဟုတ် ATI Radeon graphics ပါဝင်ပြီးတော့ Internal DVD RW ပါရှိပါတယ်။ Sound နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း Speaker ကို integrated high quality system ကို သုံးထားပါတယ်။ notebook မှာတော့ ကျွန်တော် အနီနဲရေးထားတဲ့ Function တွေကို နိမ့်နေတာတို့ မပါဝင်တာတို့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးတခုကတော့ Laptop ရဲ့ Screen ပေါ့။ သူက 14 လက်မကနေ 17 လက်မထိ ပါရှိနေတာပါပဲ့။ဒါပေ့မယ် ဒီ Screen ကြောင့်လားတော့မသိဘူးဗျ Battery ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကတော့ notebook လို ၄ နာရီကျော် ၈ နာရီကျော်ထိ ခံမှာ မဟုတ်ပဲ့ ၂ နာရီကနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်ထိသာ ခံပါတယ်။
အရမ်းကြီးကွာခြားတာ မဟုတ်ပေ့မယ် သိချင်တယ်ဆိုလို့ မေးလာသူ ညီလေးတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အဖြေမျိုးဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေ့မယ် အတက်နိုင်ဆုံး ကွာခြားချက်တွေကို ရေးပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒီထက် ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင် အကြံပြုလိုတာကတော့ Computer ရောင်းဝယ်တဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ ကွာခြားချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်းသွားကြည့်နိုင်သလို Wiki မှာလည်း တခုချင်းဆီရဲ့ အပြည့်အစုံကို အသေးစိတ်ဖတ်ရူနိုင်ပါတယ်။ ဒီစာလေးရေးဖြစ်တော့ မိသားစုကိုလည်း သတိရတာနဲ့ လာတင်ဖြစ်တာပါ။နောက်ထပ်လည်း Laptop တလုံးဘယ်လို ၀ယ်ယူရမလဲ ဆိုတာရယ် ကင်မရာ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် ရေးလက်စတွေ ရှိပါတယ်။ ရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ ပြန်လည် မျှဝေပေးဖို့ ကျွန်တော် ပြင်ဆင်ပါဦးမယ်။ကျွန်တော် အရင် ရေးလက်စနေရာမှာ မတင်ပဲ့ သက်သက် ခွဲတင်လိုက်ပါတယ်။ အရင်က ဒီနေရာမှာ netbook နဲ့ Laptop ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Last edited by သန့်ဇင်ဌေး; 31-10-2011 at 11:14 AM..
နန်းနွယ်, ဖန်ဆင်းရှင်, ဇေကြီး, မောင်စိန်ရွှေ, အေးမင်းမောင်, bagothar85, g00gle, minthike, moonson, nyi.nyi, phyomyintthein, putty, tu tu, zo
အကြိုက်ဆုံး, netbook, notebook
Laptop အကြောင်း သိကောင်းစရာ သန့်ဇင်ဌေး Hardware များဆိုင်ရာ 1 06-06-2011 01:50 PM